जाजरकोट « Nagarik Khabar
जाजरकोटका १२–१७ उमेरका शतप्रतिशतलाई कोरोना खोप
जाजरकोट । जाजरकोटमा १२ देखि १७ वर्षका २३ हजार २० बालबालिकालाई कोभिड–१९ विरुद्धको मोडेर्ना खोपको पहिलो मात्रा लगाइएको छ । १२ पुसदेखि सञ्चालन भएको खोप अभियान जिल्लाका सात वटा स्थानीय
हेमन्त केसी जाजरकोट । जाजरकोट भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रविन कार्कीले पहाडी जिल्ला जाजरकोटमा निर्माण भइरहेका अधिकांश संरचना भूकम्प मापदण्डविपरीत रहेको बताए ।
एमाले जाजरकोटको मतदान सकियो, गणना मंगलबार बिहान
जाजरकोट । जाजरकोट जिल्लामा नेकपा एमालेको नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतदान सकिएको छ । सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न असफल भएपछि निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयन गर्न मतदान भएको हो । मतगणना
उर्जाशील समय भारतमा, उमेर ढल्किएपछि पछुतो
जाजरकोट । विद्यालय पढ्ने उमेरमा आर्थिक संकट भएपछि भारत गएर कमाउने सपना बोक्नेहरु कुलतमा फसेर फर्कने गरेको पाइएको छ । सुरुमा रमाइलोको लागि सेवन गरिने मदिराजन्य पदार्थपछि लतकै रुपमा प्रयोग गर्न
जाजरकोटमा बस दुर्घटना, पाँचको मृत्यु, ३० घाइते
जाजरकोट । जाजरकोटमा बस दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ३० जना घाइते भएका छन् । नेपालगन्ज देखि राडिबजार आउदै गरेको ना. ६ ख. २७५७ नम्बरको रात्री
जाजरकोट । वडा सचिवले हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा वडा सदस्यले हस्ताक्षर गर्दा महिनौँदेखि डोल्पाका एक दम्पत्तीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा सामान्य जानकारी नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकले दु:ख
हेमन्त केसी जाजरकोट । वाम एकता गरी चुनावी मैदान जाँदा तत्कालिन नेकपा(माओवादी केन्द्र) नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको नारा थियो भेरी नगरपालिका–१३ कुदुमा यहीँ वर्ष खानेपानी पुर्याउने । तर उनी सोही नाराले
जाजरकोट । दादुराको सङ्क्रमण देखिएको रावतगाउँमा भेरी नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी पठाएर जाँच सुरु गरेको छ । यहाँका विद्यालयमा गएर सबै विद्यार्थीलाई दादुराको सङ्क्रमण भए/नभएका बारेमा जाँच गरिरहेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक दीपक ओलीले
जाजरकोटमा काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध स्थानीयवासी आन्दोलित
जाजरकोट । तीन वर्षअघि गाडिएका विद्युत्का पोल लथालिङ्ग बनाई काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । भेरी नगरपालिका–२ कोटखोलाबाट कुशे गाउँपालिका–५ पाँचकाटियासम्म गाडिएका विद्युत् पोल लथालिङ्ग
वर्षायाम कटाउन ९ हजार क्विन्टल चामल माग
जाजरकोट । वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै बारेकोट गाउँपालिकाले ९ हजार क्विन्टल चामल माग गरेको छ । बारेकोटभित्रकै खाद्य उत्पादनले १२ महिना नपुग्ने हुँदा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको
यस्तो छ एप्पलका उत्पादनमा नेपालीको भूमिका
एजेन्सी। नेपालका क्षितिज राज लोहनीले आईफोनको नयाँ पुस्ताका लागि आईफोन डिजाइन गरेका छन्। लोहनी आईफोन